Maalmahan, samaynta ecard video salaan waa hab aad loo jecel yahay in ay u diraan Christmas dooni inuu qoyskaaga iyo saaxiibadaa. Wow, video ah? Ma u malaynaysaa in ay tahay mid aad u adag? Ma aha hadda. Iyadoo Wondershare DVD Muqaal dhise , waxaad la jecel aad ka dhigi kartaa videos Christmas songs Christmas sida ugu fudud ee 1-2-3, weli wanaagsan-raadinta. Markaas email card Salaan video Christmas in saaxiibadaa iyo qoyskaaga sida ugu dhaqsaha badan. Marka hore bal aynu mid ka mid ah ugu wanaagsan salaan Christmas videos i helay, aad qeybiso jecel qoyska oo dhan ku raaxaysan!
Kolkaasaa waxaa kor u raac si aad u aragto sida loo sameeyo kaarka Salaan Christmas la videos adigoo isticmaalaya Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe ( Fiiri dheeraad ah oo ku saabsan sida loo abuuro kaararka Salaan Christmas la sawiro halkan ).
1 Import Photo oo Music
Ka dib markii socda barnaamijka, waxaad bilaabi doonaa slideshow cusub oo bannaan. Riix ah "Add Files" button dajiyaan aad jeceshahay digital videos / sawiro. Iyada oo ku xidhan baahida shakhsiga ah, waxaad ka qaadan karin music asalka ka disk deegaanka by double-riixaya meesha maran ee guddiga Music Background.
2 dar iyo Edit Cinwaan
Marka aad soo dhoofsadaan sawir / video, saamaynta guurka random lahaa aan kala sooc lahayn ayaa lagu dabakhi u dhexeeya laba videos kasta iyo sawiro. Haddii aad qabto wax aan shuruud gaar ah oo ku saabsan saamaynta guurka, markaas ka dib waxaad ku dari karaysaa rabitaanka qaab ah Cinwaan. Waxa kale oo aad dooran kartaa saamayn aamusnaan ah si Cinwaan oo ay ka dhigi aad rabto cajiib ah.
Haddii aad jeceshahay, waxaad ku dari kari lahaa qoraalka in kaarka salaan aad, sida gabayo iyo erayada had iyo jeer waa daro weyn oo ay ku muujiyaan dareenkooda ama diri rabitaanka. Halkan noocyada kala duwan ee horyalka Talyaaniga ayaa diyaar u ah in aad doorato in software ah.
3 reserved Menu
Qaar badan oo arrimo DVD menu wanaagsan-raadinta iyo xirfadeed ayaa diyaar u ah inuu kaa caawiyo inaad reserved menu ah ee aad DVD, SVCD iyo disc VCD. Haddii aad la abuuro videos iyo wadaagaan online, u gudub talaabada tan. Si aad u codsato template menu, si fudud u helaan oo u double-guji la doonayo template menu.
First xulo qaab wax soo saarka ka mid ah liiska hoos-hoos ah. Waxaa jiri doona macnaha wax soo saarka goobaha si ay u qeexaan, ama isticmaal uun goobaha default ah. Wixii DVD, hubi in aad gubi DVD disc ayaa si sax ah ku rakiban iyo shaqeeyaan si fiican. Ka sokow, waxay isticmaalaan disc ah oo tayo fiican leh. Wixii videos, waxaa lagu talinayaa in qaab MP4. Goobaha ka dib waxaa ku haboon:
Qaraarka: 320 x 240 Rate jir ah, 30 F / S aaminnimo Audio: CD (44,1 kHz)
5 samatabbixi Ecard salaantaadu
Waxa loo baahan yahay qaar ka mid ah markii ay gubaan aad Ecard Salaan gal DVD disc ama wax soo saarka sida videos. Sug samir halka ka baaraandegidda. Mar haddii aad dhameyso, in aad sidoo kale laga yaabaa in ay saaxiib ama qof qoyska ka samatabbixin aad Ecard Salaan DVD, ama geliyaan si video qaybsiga web site, dhihi YouTube. Xaalada danbe, kaliya diro link URL dadka kale ah oo ay daawan kartaa video Salaan Ecard badan web ku haboon. Hoos waxaa ku qoran shaashada si aad u muujiso sida video inay geliyaan gal YouTube.
First calaamad in ID YouTube aad , doortaan "Account" oo guji "Upload" button, ka dibna dooro "geliyaan video ah", hoos ku qor video horyaalka iyo sharaxaad. Waxa fiican in ay soo galaan tag, waayo, si fudud u baadhay dadka kale.
Haddaba adiga kuu gaar ah kaarka Salaan Christmas la videos in qof kasta aad ka naxeyso.
> Resource > Video > Sida loo sameeyo Christmas Salaan Cards la Videos